February 2020 - Shop
Shop > All Articles > 2020 > February
အိမ်မှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးမှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ် Printer လေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလား? 🤔03412
သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာကို မောပန်းနွမ်းနယ်မှုစေခြင်း မရှိစေဖို့ Sunlife ရေဆူဆေးပြားများ0997
The KaungHtet February 19, 2020 4:45 am February 19, 2020
ကျန်းမာရေးဟာ လာဘ်တစ်ပါးပါဆိုတဲ့အတိုင်း သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို အမြဲတစေဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်နော် …🤗 Sunlife Myanmar ရဲ့ ရေဆူဆေးပြားလေးတွေက အလုပ်လည်းမရှုပ်စေဘဲ လွယ်လင့်တကူသောက်လို့ရပါတယ်နော် … လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မနေစေဘဲ အိမ်ပြန်ချိန်တွေထိ လန်းစေနိုင်မှာပါ …🤩 ဆေးသောက်မှာ ကြောက်တဲ့သူတွေအတွက်ကော၊ အခါးမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း …
ထိခိုက်လွယ်တဲ့ Sensitive အသားအရည်ပိုင်ရှင်များအတွက် Bioderma Skin Care0762
The KaungHtet February 11, 2020 4:48 am February 11, 2020
ထိခိုက်လွယ်တဲ့ Sensitive အသားအရည်ပိုင်ရှင်များအတွက် Bioderma Skin Care များ နဲ့ နေ့စဉ်စကင်းကဲလိုက်ကြရအောင် ….😍 ဒီ Sensibio ပန်းရောင် Series လေးကတော့ Sensitive အသားအရည်ပိုင်ရှင်များ Combination အသားအရည်ပိုင်ရှင်များနှင့် Dry …
🖥 ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အလွယ်တကူသုံးလို့ရမယ့် ခေါက်စားပွဲများ 🖥0479
The KaungHtet February 10, 2020 11:05 am February 14, 2020
နက်မှောင်သန်စွမ်းတဲ့ ဆံကေသာအတွက် လျှို့ဝှက်ချက်က …0601
The KaungHtet February 10, 2020 5:16 am February 10, 2020
နက်မှောင်သန်စွမ်းပြီး လှပတဲ့ ဆံကေသာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မို့အတွက် ဘယ်လိုတွေထိန်းသိမ်းကြမလဲ … ဒီနေ့မှာတော့ ဆံကေသာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်လေး တစ်ခုကို ပြောပြပေးမယ်နော် …. အဲ့တာလေးကတော့ Shop မှာ Official စတိုးတစ်ခုအနေနဲ့ …
၅၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ Mask လေးတွေသုံးပြီး Glow Skin လေးကို ပိုင်ဆိုင်ကြမယ် ….0574
The KaungHtet February 10, 2020 3:51 am February 10, 2020
ဂလိုးပြီး ကျန်းမာတဲ့အသားအရည် ပိုင်ဆိုင်မို့ Mask လေးတွေကပ်ပြီး အစွမ်းကုန်လှလိုက်ကြရအောင် …. နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အပြင်ထွက်သွားလာနေတော့ သဲလေးတို့အသားအရည်လေးဟာ နေလောင်ဒဏ်တွေ၊ ဖုန်မှုန့်တွေကြောင့် ပျက်စီးနေပြီပေါ့ … ပျက်စီးနေတဲ့အသားအရည်လေးမဖြစ်အောင် ပြန်လည် ဂရုစိုက်ပေးရင်တော့ ဂလိုးပြီး ကြည်တောက်နေတဲ့ အသားအရည်လေးကို …
ချွေးပေါက်ထဲက အညစ်အကြေးတွေကို အစွမ်းကုန်သန့်စင်ပေးမယ့် Aztec Indian Healing Clay0641
The KaungHtet February 10, 2020 3:31 am February 10, 2020
ဒီတစ်ခါတော့ နာမည်ကြီး၊ လူသုံးများတဲ့ Aztec Secret ကထုတ်တဲ့ Calcium Bentonite Clay အကြောင်းကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ် ။ 😊 ချွေးပေါက်ထဲက အညစ်အကြေးတွေကို ရှင်းထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ Clay Mask တွေကနာမည်ကြီးပါ ။ နာမည်ကြီး …
သင့်စိတ်ကြိုက် Basketball တွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မယ့် Shop.com.mm0370
The KaungHtet February 7, 2020 10:04 am February 7, 2020
ရှောင်ကောကောတွေကိုပဲကြိုက်နေလို့ မဖြစ်သေးဘူးနော် … ရှောင်ကောကောတွေ ကစားတဲ့ ဘတ်စကတ်ဘော ကစားနည်းကိုလည်း ကြိုက်ထားမှရမှာနော် သင်ကြိုက်ကြွေနေတဲ့ ရှောင်ကောကောက ဘတ်စကတ်ဘောကစားတယ်ဆိုရင် ဒီနှစ် Valentine’s Day မှာ အပေးသင့်ဆုံးလက်ဆောင်ကတော့ ဘတ်စကတ်ဘော ဘောလုံးပါပဲ … 🏀 …
ကျန်းမာလှပတဲ့ အသားအရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် အသင့်ရှိနေတဲ့ Innisfree Green Tea Balancing Skin Care0712
The KaungHtet February 5, 2020 10:07 am February 5, 2020
စိုပြေပြီး ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ အသားအရည်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မို့က ပျိုမေတွေကိုကိုတွေရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပါ …😇 ကျန်းမာလှပတဲ့ အသားအရည်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မို့ဆိုရင် ဘယ်လိုစကင်းကဲတွေက ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိလဲဆိုတာ သိရမှာပေါ့ … အလှကုန်တွေကြားမှာ နာမည်တစ်ခုယူထားတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Innisfree က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ …